Ku saabsan xadidaada lagu suubiyay sharciga qaabilaada dadka magangelyodoonka (LMA) - Migrationsverket
/ Ku saabsan xadidaada lagu suubiyay sharciga qaabilaada dadka magangelyodoonka (LMA)
Su’aalaha iyo jawaabaha ku saabsan xadidaada oo sharciga qaabilaada dadka magangelyodoonka (LMA)
Vad innebär ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) – somaliska
Waa maxay macnaha isbedeley ee sharciga dadka magangelyodoonka ah (LMA)?
Macnaha isbedelka sharciga dadka magangelyodoonka ah (LMA) waxa weeye adiga laguma siinayo kaalmadii dhaqaale ee lagu siinjiray haddii lagu siiyey go’aan ku saabsan celin ama masaafurin taas oo aan go’aanka laga dacwoonkarayn ama rafcaan laga qaadankarayn, ama wakhtigii aad adigu iskaa si xor ah wadanka uga bixilahayd uu dhamaaday. Macnaheedu waa in aan lagu siinayn lacagtii maalin laha ahayd ee lagu siin jiray iyo in aanad xaq u lahayn in aad deggenaato guryaha dadka magangelyodoonku ay deggen yihiin guryahaas oo ay Hay’adda laanta socdaalku lacagtooda bixiso.
Cidee ayuu khuseeyaa isbedelka cusub ee LMA?
Si uu kuu saameeyo sharciga la bedeleyaa waa inaad adigu
haystaa go’aan ku saabsan in lagu celinayo ama lagu masaafurinayo go’aankaas oo aan rafcaan laga qaadankarayn ama aad haysato go’aan wakhtigii celinta ama kii masaafurisku ee uu qofku iskii si xor ah uu wadanka uga baxo uu dhamaaday
inuu qofku ugu yaraan yahay 18 jir.
in aanad haysanin carruur da’doodu ka hoosayo 18 jir ku waas oo aad adigu hayso daryeelka iyo mas’uuliyadooda.
Xaq ma u leeyahay inaan helo kaalmada dhaqaale haddii go’aankii laysiiyey aan laga dacwoonkarayn ama rafcaan laga qaadankarayn?
Xaq waad u leedahay khaalmada dhaqaale in lagu siiyo haddii Hay’adda laanta socdaalku ama maxkamadu oggolaadaan in arrintaada dib loo eego ama ay go’aamyaan in si ku meelgaar ah loo joojiyo celinta ama masaarufiska aad haysato, maxkamada ka saraysa Hay’adda laanta socdaalka ayaa arrinta eegeysa. Marka aad oggaato inaad haysato go’aan noocaas ah waxa khasab kugu ah inaad adigu u soo sheegtid Hay’adda laanta socdaalka in markale aad bid u rabto in lagu siiyo kaalmada dhaqaale. Warbixin intaa dheer waxaad kala xiriiraysaa Hay’adda laanta socdaalka.
Ilaa intee in leeg ayaan anigu deggenaanayaa guryaha Hay’adda laanta socdaalka?
Adigu waad sii deggenaankartaa guryaha Hay’adda laanta socdaalka ilaa iyo inta go’aanka celita ama kan masaafuriska aan rafcaan laga qaadankarayn ama laga dacwoonkarayn. Haddii aad haysato go’aankii ku saabsanaa inaad adigu si xor ah oo ikhtiyaarkaaga ah u laabanaysid xaq ayaad u leedahay inaad sii deggenaato ilaa iyo inta uu dhammaanayo ama uu ku egyahay wakhtigaasi.
Xagee ayaan anigu aadayaa haddii aan lay oggolayn inaan sii deggenaado guryaha Hay’adda laanta socdaalka?
Marka go’aankaagii ku saabsanaa celinta ama masaafurinta aanad ka dacwoonkarayn ama uu dhammaaday wakhtigii aad adigu si xor ah u laaban lahayd waxa markaa khasab adiga kugu noqonaysa inaad wadanka Iswiidhan di buga laabatid. Hay’adda laanta socdaalka ama booliiska ayaa kaa caawinaya arrimha aad u baahan tahay si aad wadankaagii ugu laabatid.
Maxaa dhacaya haddii aan diido inaan ka baxo guriga ama meesha aan deggenahay?
Haddii aad diido inaad ka baxdo guriga aad deggen tahay markaa waxaa lagaaga saarayaa khasab maxaayeelay xaq uma lihid inaad sii deggenaato guryaha Hay’adda laanta socdaalka. Inuu qofku diido inuu ka baxo guryaha waxay noqonaysaa fal dembiya.
Hay’adda laanta socdaalku waxay iga joojisay wakhtigii aan iskay si xor ah u laaban lahaa waxaanay iga mamnuucday in aanan wadanka laba sannadoo ku soo noqon. Goorma ayaan guriga aan deggenahay ka baxayaa?
Marka wakhtigii aad iskaa si xor ah wadanka luga laaban lahayd uu dhammaado ayaad ka tegeysaa deggaanka aad deggen tahay ama guriga.
Waxa jira boos iiga banaan inaad deggenaado guryaha Hay’adda laanta socdaalka. Shaqaalaha ka shaqeeya guryaha la deggen yahay ayaa igu yiri waad deggenaankartaa. Ma sii deggenaankaraa?
Maya, laguuma ogola inaad deggenaato. Hay’adda laanta socdaalka ayaa go’aaminaysa qofka xaqa u leh in kaalmada dhaqaale iyo qofka xaqa u leh inuu sii deggenaado.
Miyaa aniga layga caawinayaa safarka wadakaygii?
Haddii aad adigu la shaqayso Hay’adda laanta socdaalka waxay kaa caawinayaan waxyaabaha aad u baahan tahay ee khuseeya marka aad wadankaaga ku laabanaysid. Haddii aanad adigu tigidka aad wadankaagii ugu laabanaysid iska bixinkaraynin waxa kaa caawinaysa Hay’adda laanta socdaalka. Haddii ay arrintaada booliisku gacanta ku hayaan iyaga ayaa ka mas’uula waxyaabaha aad u baahan tahay marka aad wadankaagii ku laabanaysid.
Anigu xaq uma lihi inaan qaato kaalmada dhaqaale. Ma isticmaalikaraa kaarkayga-LMA si aan u aado takhtarka oo aan u soo qaato daawo warqad laygu qoray?
Maya, kaarkaaga LMA-ga waxaad keenaysaa marka ay kaalmada dhaqale lagaa joojiyo.
Waa inaan helo daryeel caafimaad iyo daawo. Ma helikaraa caawimo lacageed si aan daawo u soo gato?
Xaq ayaad adigu u leedahay inaad hesho daryeel caafimaad iyo daawo adigoon oggolaansho Iswiidhan ku lahayn haddii uu qofka dhakhtarka ah ama kan dhakhtarka ilkuhu ay go’aamiyaan inaad u baahan tahay daryeel caafimaad oo aanad sugikarayn. La xiriir daryeelak caafimaadka (dhakhtarka) haddii aad caawimo u baahan tahay ama aad warbixin u baahan tahay.
Hay’adda laanta socdaalku kuma siinayso lacag marka aad u baahan tahay daryeel caafimaad ama daawo haddii aanad xaq u lahayn in lagu siiyo kaalmo dhaqaale. Sidoo kale ma isticmaalikartid kaarkaaga LMA-ga si ay daawadu raqiis kuugu noqoto ama booqashada dhakhtarka.
Warbixin intaa ka badan waxaad ka helaysaa Hagidda caafimaadka daryeelka ee (1177 Vårdguiden)
Anigu waxaan ahay ilmo keligiis ah oo aan waalidkii la socon oo haysta go’aan masaafuris ah oo aan laga dacwoonkarayn. Maxaa dhacaya marka aan buuxiyo 18 sannadood?
Haddii aad haysato go’aan ku saabsan masaafurin go’aankaas oo aan laga dacwoonkarayn isla markaana uu dhammaaday wakhtigii laguugu talogalay inaad si xor ah iskaa adigu wadanka uga baxdo waxa markaa kaa istaagaya kaalmadii dhaqaale ee lagu siinjiray marka aad 18 sannadood buuxiso wadankana waa inaad ka baxdo.
Anigu waxaan ahay ilmo keligiis yimi wadank oo aan waalidkii la socon laakiin waxaan la deggenahay qof aniga iga weyn oo qaraabadayda ah. Qofka qaraabadaydu ma qaato kaalmada dhaqaale. Maxaa dhacaya haddii aanan anigu la sii deggenaan qofkaas qaraabadayda ah?
Haddii aanad la sii deggenaan qodkaas qaraabadaada ah waxa markaa ku imanaya shaqaalaha adeega bulshada ka shaqeeya ee degmada aad deggen tahay oo kaa caawinaya meeshii aad degi lahayd.
Ilmahaygu sadex bilood kadib wuxuu buuxinayaa 18 sannadood. Annagu waxaanu haysanaa go’aan ku saabsan celin ama masaafurin go’aankaasna lagama dacwookaro wakhtigii aanu iskayo si xor ah u laaban lahayn wuu dhammaaday. Xaq umalihin yimaa kaalmada dhaqaale marka uu ilmuhu buuxiyo 18 sannadood?
Maya, xaq uma lihidin in laydin siiyo kaalmada dhaqaale laga bilaabo marka uu ilmuhu buuxiyo 18 sannadood.
Maxaa ku dhacaya meeshii aan tababarka/baraktiiga ku samayn jiray marka laygaa joojiyo kaalmada dhaqaale?
Marka kaalmada dhaqaale kaa istaagto ee lagaa joojio ma sii wadikartid meeshii aad baraktiga ku samayn jirtay.
Anigu waxaan haystaa [AT-UND] waanan shaqeeyaa. Ma sii shaqaynkaraa anigoon xaq u lahayn kaalmada dhaqaale?
Xaq ayaad u leedahay inaad haysatid [AT-UND] ilaa iyo inta aad wadashaqayn la samaynaysid inaad ogoshahay inaad wadanka ka baxdo. Haddii aanad wada shaqayn la samaynin sidii aad wadanka uga bixi lahayd markaa bahashaada [AT-UND] ma shaqayanso.